ANKOLAFY MPANOHITRA : Mitsipa-doha laka-nitana ny Fitondrana Hvm
Mivoaka tsikelikely amin’ny fahanginany ireo antoko mpanohitra vao nahare ny fanambarana nataon’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta fa mety hasiam-panamboarana io lalàmpanorenana io. 15 septembre 2017
Hentitra ireo antoko avy amin’ny ankolafy mpanohitra raha namaly bontana an’io fanambarana io, izay midika ho fitsipahana ny safidim-bahoaka, araka ny fanehoan-kevitra nataon’izy ireo. Ho an’ireo antoko mpanohitra dia ny vahoaka no anisany nandatsa-bato noentina nandaniana ny lalàmpanorenana kanefa dia izao kasain’ny fitondram-panjakana hovaina izao.
« Mitovy amin’ny mitsipa-doha laka-nitana ny fitondrana Hvm », hoy ny fanambarana nataon’izy ireo. Anisany nitondra ny heviny mahakasika ity raharaha fanovàna ny lalàmpanorenana ity ny avy amin’ny antoko Malagasy miara-miainga na Mmm. Tamin’ny alalan’ny tompon’andraikitry antoko, Laurent Ramaroson no nilazany fa « efa hita taratra tamin’ny fanendrena ny filohan’ny antenimierandoholona ankehitriny io ka hisy ny fikitihana ny lalàmpanorenana ».
Ho an’ny antoko Malagasy miara-miainga manokana dia tokony ny fanajana ny lalàm-panorenana no hataon’ny fitondrana laharam-pahamehana fa tsy ny fanovàna azy velively. « Efa nianianan’ny mpitondra io lalàmpanorenana io ka tokony hajaina », hoy hatrany ny fanambarany. Ankoatr’izay dia mitsipaka marindrano ny fikasan’ny mpitondra ihany koa ny antoko avy amin’ny Mapar.
Ho an’ity farany dia fanatanterahana ny fifidianana no tokony himasoana fa tsy fandrebirebena saim-bahoaka ka hanao fitsapan-kevi-bahoaka hoentina hanovàna ny lalampanorenana indray. Tahaka ny fanehoan-kevitra efa nivoitra hatramin’izay dia iraisan’ireo mpanohitra ny fiheverana fa misy tetika voaomana kasain’ny mpitondra hatao ao ambadik’izao fikitihana ny lalampanorenana izay mety hiafara amin’ny fanitarana ny fotoam-piasan’ny Filoham- pirenena ankehitriny izao. Hentitra ny Mapar raha nilaza fa « rehefa tapitra ny fotoam-piasan’ny Filoham-pirenena dia tokony hiandry fifidianana ny vahoaka fa tsy tokony horebirebena amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka izany. Ary tsy tokony handany andro na handany vola amin’izany”, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra avy amin’ny Mapar.
Tsy nanameloka an’i Mamy Ravatomanga ny Fitsarana Frantsay FANOSORAM-POTAKA NATAON’NY HVM (244) 18 juillet 2019 Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray ANTENIMIERAM-PIRENENA (87) 22 juillet 2019 Notanana am-ponja vonjimaika any Tsiafahy LEHILAHY IRAY NITORAKA POLISY (73) 19 juillet 2019 Nampiray ny Malagasy tsy vaky volo ny Barea KARDINALY TSARAHAZANA DESIRE (68) 16 juillet 2019 Voasambotra ilay jiolahy raindahiny tompon’antoka FANAFIHANA MPANDRAHARAHA (55) 17 juillet 2019 Efa vonona hitondra mpitsangantsangana ireo mpitari-dia FANOMPOABE (53) 16 juillet 2019